Kooxda fanka: sifooyinka, shaqada iyo muhiimadda | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 21/04/2021 12:31 | Deegaanka
Dhanka cilmiga noolaha iyo cilmiga dhirta waxaa jira waxyaabo badan oo ku saabsan band caspary iyo muhiimada ay leedahay. Waa isku dhejinta darbiyada unugyada oo door muhiim ah ka ciyaara unugyada taageerada dhirta xididdada iyo qaar ka mid ah algae. Waan ognahay in derbiga unuga uu ka kooban yahay lignin iyo suberin isla markaana ay ka caawiso ilaalinta geedka. Kooxda loo yaqaan 'Caspary band' ayaa la sameeyaa isla waqtigaas sida gidaarka unugyada aasaasiga ah ee xididka koowaad iyada oo laga bilaabo halkaa muhiimad weyn u leh horumarinta geedka.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato sameynta iyo muhiimada kooxda Caspary.
2 Waxqabadka 'Caspary band'
3 Kooxda fanka iyo biyaha
3.1 Jidka Apoplast
3.2 Jidka naxariista leh
Waxaan ognahay in endodermis-ka derbiyada unuggu leeyahay dhumuc, adadag, caabbitaan aan la soo koobi karin oo ka caawiya ilaalinta unugyada dhirta. Dhumucda darbiyada unugyada radial iyo transverse waxaa keena polymer dabiici ah oo loo yaqaan 'Caspary band'. Waxay ka ciyaaraysaa door aasaasi ah unugyada taageerada dhirta xididdada iyo qaar ka mid ah algae. Waxaa jira faallo ku jirta unug kasta oo ay soo dhex galaan walxaha dabiiciga ama polymer-ka waxayna calaamad u tahay kala duwanaansho weyn oo u dhexeeya derbiyada aasaasiga ah ee unugyada.
Kooxda loo yaqaan 'Caspary band' waxay ku fidsan yihiin darbiyada oo dhan si joogsi la'aan ah. Taasi waa, uma muuqato isku mar dhammaan unugyada endodermis-ka. Magaceedu wuxuu ka yimid soo saarista nooc ka mid ah lakabka biyaha diidan ee ay soo saarto. Maxaa ku bilaabmaya dhigista walxaha fenolic-ka iyo dufanka leh ee darbiyada shucaaca ee unugyada aakhirka waxay isu noqonayaan suun ku biira xuubka plasma si loo kordhiyo dhumucdiisa. Waan fiirsan karnaa Burcadda Caspary iyada oo loo marayo mikroskoobka iyadoo la isticmaalayo dheeh noole ah oo loo yaqaan Safranin. Kooxdaani waxaa la dhihi karaa waa suun meesha gidaarrada asaasiga ahi ku duugan yihiin.
Waxqabadka 'Caspary band'
Waxaan ogaan doonnaa waxa ay tahay kooxda kooxda Caspary. Waxay ka kooban tahay badanaa suberin waxayna ka kooban tahay qaab-dhismeed beddelaad ah oo u adeega sidii caqabad u dhexeysa dhirta iyo deegaanka. Waan ognahay in dhirtu u baahan tahay difaac gaar ah aysan waxyeeleynin wakiilo dabiici ah oo ka jira deegaanka. Intaa waxaa dheer, mid ka mid ah shaqooyinkeeda waa inay farageliso gaadiidka biyaha iyo ion iyada oo loo marayo apoplast ee xididka. Waxay sidoo kale ka hortagtaa walxaha inay dhex maraan qalabkan waxayna ku qasbeysaa gaadiidka dhexdooda hab fudud.
Suberin wuxuu ka kooban yahay hydroxy, epoxy, iyo dicarboxylic fatty acids. Asiidhyadaas dufanka badani waxay buuxiyaan booska qaybta ka-baxsan unugyada ee daafaha unugyada dhirta. Taasi waa, waxay xannibtaa marinka walxaha inta u dhexeysa derbiyada endodermis iyo dareeraha ciidda ka dhammaanaya ee maraya cytoplasm. Sidan oo kale, faaiido xulasho leh oo xiiso leh ayaa loo abuuray geedka. Tani waa sida dhirtu u xakamayn karto qulqulka ions, u xakamayn karo gelitaanka biyaha iyo walxaha kale ee macdanta ah
Haddii aan u gudubno endodermis-ka unugga, waxaan arki karnaa inay tahay lakabka keliya ee unugga ee ka hortagaya u gudbidda walxaha carrada ee xirmooyinka xididdada dhiigga. Endodermis-ka waxaa daboolay kiliyaha inkasta oo walxaha ion ay si fudud u kala faafi karaan rhizodermis iyo silsiladda xididdada dhiigga, ma heli karaan tan dambe. Sababtaas awgeed, wadiiqadu waa syplast-ka dhirta ama cytoplasm-ka epidermis-ka.
Kooxda fanka iyo biyaha
Dhirta badankood, biyuhu si dabiici ah ayey xididdada ugu galeen. Muhiim ma aha in la helo kharash dheeraad ah oo tamar ah si biyuhu uga soo galaan xididdada. Si kastaba ha noqotee, dhaqdhaqaaqa biyaha dhex maraya qolofka iyo lakabka gudaha oo dhan waxay isticmaalaan tamar badan waxayna maraan habab kala duwan. Dhaqdhaqaaqa biyaha ee xylem wuxuu ku dhici karaa laba siyaabood: apoplast iyo syplast. Burcadda Caspary labadaba way joogaan. Waxaan si qoto dheer u baran doonnaa kuwaas oo ah labada waddo ee kooxda Caspary laga helo:
Waa gobolka geedka aan ku jirin protoplast. Dhexdooda ayaa ah meelaha banaan ee sida muuqata u dhexeeya derbiyada unugyada iyo inta u dhexeysa unugyada kala duwan. Apoplast-ka wuxuu ka kooban yahay mid ka mid ah aagagga laga heli karo biyaha iyo walxaha kale ee lagu daro gudaha geedka. Wadadani waxay u adeegtaa marin biyoodka kaarboon laba ogsaydhka ilaa chloroplast. si gacan looga geysto hagaajinta kaarboonka inta lagu gudajiro howsha sawir-qaadista. Waxay sidoo kale soo dhexgalaan ka dib iska caabbinta dhirta ee noolaha kala duwan ee phytopathogenic kuwaas oo culeys saari kara dheef-shiid kiimikaadka.
Waa in la tixgeliyaa in meelaha u dhexeeya derbiyada unugyada iyo inta u dhexeysa unugyada ay u buuxsamaan sidii polymer dabiici ah oo dabeecaddoodu tahay baruur. Polymer-yada noocan ah ayaa ka kooban kooxda loo yaqaan 'Caspary band' waxayna ka hortagaan faafinta biyaha iyo ion-ka. Gaadiidka walxahan oo loo maro apoplast-ka ayaa ah mid aan waxba ka jirin, oo aad uga hooseeya kan ku dhaca dariiqa naxariista leh.
Jidka naxariista leh
Isugeynta endodermis waxay ka dhigan tahay in wadada kaliya ee gaadiidka loo maro ay tahay syplast-ka. Waa halka ay biyuhu kaga gudbaan xuubka cytoplasmic-ka iyo protoplasts-ka unugyada. Waxaa loo arkaa gaadiidka ugu firfircoon iyo Waxay uga baxdaa unuga unuga unuga iyadoo la isticmaalayo kala duwanaanta awoodaha biyaha. Waxaan aragnay inuu apoplast leeyahay dhaqdhaqaaq biyo ah iyadoo loo marayo dhaqdhaqaaqa dhididka. Tani waxay dhacdaa badanaa ka dib lumitaanka biyaha illaa furitaanka stomata.
Syplast waa protoplast-yada isku xiran ee dhaliya cytoplasm-ka unugga. Isla mar ahaantaana waxaan arki karnaa inay ku xiran yihiin plasmodesmata. Halkan ayay ku socotaa in biyuhu si dhib yar u socdaan iyo sidoo kale maaddooyin iyo maaddooyin kale oo miisaankoodu hooseeyo.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto kooxda Caspary iyo muhiimadda ay u leedahay dhirta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Kooxda Caspary
Xayawaanka hilibka leh